7'S in Guba | Casino UK
warshadaha ciyaaraha waa laga buuxiyay la kulan online in ay ku raran yihiin muuqaalada dheeraad ah. Laakiin mar halka a yimaado Afyare ah in diiradda kaliya on duntu iyo calaamadaha iyo weli waa faa'iido iyo madadaalo. 7'S in Guba waa mid ka mid ah sida uncluttered UK Mobile naadi ciyaarta.
About Developer ee 7 ee Guba
Games Sayniska waa qeybiye wax garadka content-driven, tayo sare-xal ciyaaraha si bakhtiyaa caalamiga ah iyo warshadaha ciyaaraha nidaaminaya. Tani naadi mobile UK ciyaarta waa ciyaar kale oo xiiso leh shirkadda.
Sida naadi mobile UK ciyaarta bilaaban, hal wax oo taagan doonaa waa ciyaar ee theme kaas oo ah dabka. Sidaas daraaddeed aad leedahay duntu la tixraacayo Guba olol orange. Calaamooyinka bandhigay duntu la xaqiijin theme Retro ee ciyaarta. calaamad kasta oo ka kooban laba lammaane oo walxood wada. Sidaas aad aragto cufayo qaraha la baararka double, xiddigaha la dawanno, liinta la jeeriga iyo plums la liin. Saddex plums leh liin iyo saddex liinta la jeeriga idin siin ah 8 jeer multiplier. Saddex ka mid ah cufayo qaraha la baararka double aad ka abaal marin 20 jeer multiplier. Saddex xiddigaha la dawanno la imaan 40 jeer multiplier. The calaamadaha ugu abaal sidoo kale ku yimaadaan laba nooc,, labo ka mid ah 7. Mid ka mid ah kuwan 77 waa calaamad cas midab caadi ah laakiin kan kale 77 waxaa ololkiis ka soo baxay waxaa ka mid ah gubanaya. 100 jeer multiplier la siiyo haddii aad dalka saddex fudud 77 walxood oo caga saddex kulul 77 walxood oo heshay ugu badan ee aad u hesho 250 jeer aad saamiga.
The sifooyinka kale ee this naadi mobile UK waa:
Hi dhigeeysa rullaluistemadka- Sida ma jiraan calaamado kala firdhiso, waa in aad haddii aad rabto in aad u tagto wareega gunno ah. Haddii aad go'aansato in aad u ciyaaro feature this ka dibna kaliya aad leedahay si aad riix badhanka rullaluistemadka Hi soo bandhigay shaashadda. Waxaad heli doontaa shan dhigeeysa dheeraad ah diidanyihiin kulul 77 icon replaces other symbols present on the reels.
khamaar Feature- The UK naadi mobile ciyaarta sidoo kale faanaa ee feature Gamble in shaqeysiin karaa inta lagu guda jiro wareejin ah by riixaya badhanka Gamble ah. Haddii aad ku guuleysato waxaad ka heli laba jeer ka badan ka dibna aad heshay iyo haddii ay dhacdo inaad lumiso ka dibna wax kasta joogo la mid ah.
Tani Afyare classically magacaabay qoreysa sawiro cajiib ah oo ay la socdaan soundtrack u eegayey. 7'S in Guba siinayaa meelmarin ah oo ku saabsan 95.1% in ciyaartoyda ay.